watchOS 3 waxaa ku jira hawl cusub oo lagu sameeyo wicitaannada degdegga ah | Wararka IPhone
Nooca soo socda ee watchOS, sidaan ku arki karnay muxaadarada bandhigga Juun 13, waxay na siin doontaa warar muhiim ah sida fulinta codsiyo badan, hagaajinta ilaa 7 jeer xawaaraha. Laakiin sidoo kale waxay noo keeni doontaa wajiyo badan iyo codsiyo lagu cabirayo waxqabadka dadka isticmaala kuraasta curyaamiinta
Laakiin iyagu keligood ma aha. Apple waxay ku soo kordhisay aalad cusub badhanka awooda qalabka waxay badbaadin kartaa nolosheena haddii shil dhaco. Halkii, waa laba ikhtiyaar oo cusub. Dhinac waxaan ka helnay ikhtiyaar cusub oo noo oggolaanaya inaan wici karno xaaladaha degdegga ah.
Wicitaanada degdegga ah iPhone-kaygu waa inuu leeyahay calaamadda moobiilka ama uu ku xiran yahay calaamadda Wi-Fi inaad awood u yeelatid inaad wicitaan ku samayso adeegga gurmadka ee waddanka aad joogto. Laakiin sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan ku darno xiriiradayada haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah. Si loo isticmaalo watchOS 3, waxaa lagama maarmaan ah in lagu rakibo iOS 10 qalabkeena.
Hawlaha kale ee cusub ee watchOS 3 na keenaya waxay noqon doontaa suurtagalnimada uga helno xogtayada caafimaad isla badhanka kaas oo aan ku damin karno qalabka. Macluumaad aan sidoo kale si toos ah uga heli karno iPhone-keena. In kasta oo dabcan, haddii uu shil dhaco Apple Watch markasta way ka dhowaan doontaa gacanta gacanta iPhone-ka.
Si aad u awoodo inaad gasho xogta caafimaadka, waa inaan isticmaalnaa barnaamijka caafimaadka ee iPhone, xog si otomaatig ah loola wadaagi doono Apple Watch oo ku sii jiri doonta kaydinta si haddii xaalad degdeg ahi dhacdo aan loo baahnayn in laga helo iPhone-ka meel u dhow Apple Watch. Codsigan gudahiisa waxaan ku geli karnaa taariikhda dhalashada, miisaanka, dhererka, nooca dhiigga iyo sidoo kale inaan nahay xubin ku-deeqe iyo in kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » watchOS 3 waxaa ku jira muuqaal cusub oo loogu talagalay wicitaanada degdegga ah
Marka watchos 3 kaliya wuxuu la shaqeeyaa macruufka 10? Waa maxay dhar apple Tufaax aad u fiican, saaxiibo sameeya…
Ignasio oo waa beta-ga dadweynaha ee watchOS 3 oo la heli karaa?
Ku jawaab Renato
Sawir cusub oo ah noocyada bandhigga ee iPhone 7